Orinasa fivarotana kitapo sakafo any Shina, Kitapo rongony, Kitapo taratasy, kitapo azo ovaina - Beyin Packing
Beyin fonosana dia mpanamboatra fonosana matihanina matihanina, manampahaizana manokana amin'ny famolavolana sy famokarana kitapo kafe, kitapo rongony, kitapo dite, kitapo tsakitsaky, kitapo voa, kitapo voankazo maina, kitapom-bary, kitapo sakafom-biby, kitapo vovoka, kitapo saosy, kitapo banga, kitapo famerenana, kitapo ho an'ny vata fampangatsiahana, kitapo misy spout, kitapo taratasy, horonan-tsary, sns, kitapo azo ovaina azo zahana ihany koa.
Ny haben'ny kitapo dia isan-karazany manomboka amin'ny 0,5g ka hatramin'ny 1lb. Betsaka ny vonona handefa modely, toy ny cookies, runtz, jungle boy, skoty, mofomamy fampakaram-bady, tady vaovao, nofinofy manga, sns. Ary koa afaka manao karazana kitapo fanoherana zaza isika, toy ny kitapo N slid, kitapo zipper roa, kitapom-batsy slider, sns .Mba mila fanazavana fanampiny momba ny vonona kokoa handefa kitapo sy kitapo manokana!
Ny kitapo kafe dia malaza erak'izao tontolo izao, matetika dia mety ho kitapo fisaka, kitapo mijoro, kitapo gusset ary kitapo ambany fisaka. Ho an'ny ara-pitaovana, saika ny mpanjifa rehetra no maniry foil milahatra ao anatiny, fa ny sasany kosa tia ny vita matt ary ny sasany kosa toa milay. Ho an'ny valizy, raha tsaramaso kafe ny vokatrao, dia mila valizy tokana ianao hamoahana ny rivotra, raha toa ka vovoka kafe ny vokatrao dia tsy mila valva.
Ny kitapo spout dia be mpampiasa amin'ny zava-pisotro, saosy, ary sakafon-jaza, sns. Misy habe maro ho an'ny kitapo spout, toy ny 50ml, 100ml, 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml, sns. Mety hisokatra ambony, spout ambony na spout eo anilany, spout mahazatra na fanoherana fanoherana zaza ho an'ny sakafon-jaza, tsy misy zipper, zipper mahazatra na zipper roa.
Kazuo Beyin Paper sy Plastic Packing Co., Ltd. izay teo alohany dia Xiongxian Juren Paper sy Plastic Packing Co., Ltd, dia natsangana tamin'ny taona 1998 tany am-piandohana. Taorian'ny fampandrosoana 20 taona mahery, izao Beyin fonosana izao dia novolavolaina mba hamokatra orinasa iray izay manokana amin'ny famolavolana sy famokarana harona fonosana plastika azo ovaina. Ny fahaizan'ny famokarana dia mety hahatratra RMB 60 tapitrisa isan-taona; Atrikasa 7 no natsangana niaraka tamina fitaovam-panatanjahan-tena 50 napetraka. Misy mpiasa mihoatra ny 100 ao amin'ny fonosana Beyin, 50 amin'izy ireo no teknisianina matihanina manana mari-pahaizana fanontana pirinty, teknisiana zokiolona 10 efa mandray indostrian'ny fonosana mandritra ny 10 taona. Ireo mpiasa manana traikefa manan-karena dia manome fahafaham-po tanteraka ny fangatahan'ny mpanjifa rehetra.
Ny fonosana Beyin dia nandoa ny karaman'ny mpiasan'izy ireo hanao fitsapana ny asidra nokleika Amin'izao fotoana izao, henjana ny toe-java-misoroka sy fanaraha-maso ny valanaretina eto amin'ny faritaninay, maro kokoa ny olona misafidy ny hanao asidra niokleika amin'ny volany manokana ...